‘सेकुवा’ पुस्तकसँगै किशोर साहित्यको प्रवद्धन : RajdhaniDaily.com
वर्षेनी बाढीको त्रासमा इटहरी गैरीगाउँका बासिन्दा
विवेक विवश रेग्मी - June 18, 2021 0
इटहरी । झन्डै चार बर्षअघि विनासकारी बाढीबाट इटहरीमा एकै घरका तीन जनासहित दस जना बेपत्ता भए । जसमध्ये ८ जनाको शव भेटियो । दुईजना...
प्रदेशमा सबैभन्दा मुर्ख मुख्यमन्त्री मै हुँ : पृथ्वीसुव्वा गुरूङ
राजधानी समाचारदाता - June 18, 2021 0
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेशमा सबैभन्दा मुर्ख मुख्यमन्त्री आफू भएको इंगित गरेका छन् । नवनियुक्ति मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशमा विश्वासका...
अब निर्माण क्षेत्र र उद्योग खुला
काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने नीति तय गरेको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले निर्माण...
महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि संशोधन
महेश्वर गौतम - June 18, 2021 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसल पार्टीको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि संसोधन गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कांग्रेसले पदाधिकारी...
विजय नेपाल - June 18, 2021 0
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएका छन् । गण्डकीमा लामो समयको राजनीतिक खिचातानी शुक्रबार उनको पक्षमा विश्वासको मतसँगै अन्त्य...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज विश्वासको मत लिने
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका छन् । गत २९ जेठमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त...
जसपामा विवाद झन्झन् चर्किँदै
सुभाष साह - June 18, 2021 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित...
निराजन पौडेल - June 18, 2021 0
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले...
खोप खरिदमा ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ सर्त
प्रशान्त वली - June 18, 2021 0
काठमाडौं । खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारले सो सर्त पालना गर्ने भएको छ । नेपालले...
बढीपहिरो अपडेट : ११ जनाको मृत्यु, २५ बेपत्ता
राजधानी समाचारदाता - June 17, 2021 0
काठमाडाैं । मनसुन प्रवेशसँगै परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र हावाहुरीका कारण मुलुकका विभिन्न जिल्ल्लामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । जेठ ३१...
गण्डकीका मुख्यमन्त्री मनाङमा अड्किए
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको टोली मनाङ सदरमुकाम चामेमा रोकिएको छ । मौसममा खराबी आएपछि टोली उद्धारमा खट्न सकेको छैन...
बाजुराको एक सय भन्दा बढि गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा
नन्दा थापा - June 17, 2021 0
बाजुरा । लगातारको बर्षाले बाजुरा जिल्लामा १ सय भन्दा बढी गाउँ बाढि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुराका अनुसार ९...
भक्तपुरमा ९५ प्रतिशत संक्रमित कोरोना मुक्त, २७७ को मृत्यु
सञ्जीब दुलाल - June 17, 2021 0
भक्तपुर । भक्तपुरका ९५ प्रतिशत कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन् । भक्तपुरका २१ हजार २३४ जना संक्रमित मध्ये मंगलवार साँझसम्म २० हजार २१६ जना...
रियलमा रामोस युग अन्त्य
एजेन्सी - June 18, 2021 0
मड्रिड । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका सर्वाधिक सफल कप्तान सर्जियो रामोसले क्लब छाडेका छन् । रियलले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै रामोसले क्लब छाड्ने...
महर्जन एरोविक टिटिको ब्रान्ड एम्बेसडर
काठमाडौं । पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी अनिता महर्जन नेपालका लागि लन्डनस्थित एरोविक टेबल टेनिसको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएकी छन् । एरोविकले महर्जनलाई ३...
युरोकपः बेल्जियम र नेदरल्यान्ड नकआउट चरणमा
कोपनहेगन । सत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै बेल्जियम र नेदरल्यान्ड युरोकप फुटबलको अन्तिम १६ अर्थात् नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । समूह 'बी' बाट बेल्जियम...
पलेसाले पाराओलम्पिक खेल्ने पक्का
काठमाडौं । नेपाली पारातेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले टोकियो पाराओलम्पिक गेम्स २०२० खेल्ने पक्का भएको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पलेसाले वाइल्डकार्डमार्फत...
नेपाल एसियन कपको तेस्रो चरणमा, प्ले अफ खेल्नु नपर्ने
काठमाडौं । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले एसियन कपका लागि छनोट प्रक्रियामा परिमार्जन गरेसँगै नेपालले एएफसी एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा अब प्ले...
महाव्याधि र विपदमा पनि कुर्सीकै झल्को !
सागर पण्डित - June 18, 2021 0
देश झन्डै ढेड वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित छ । नागरिक प्रताडित छन् भने ८ हजार ५ सय बढी मृत्यु वरण गर्न बाध्य...
प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता
लक्ष्मविलास कोइराला - June 18, 2021 0
‘सरकारै सरकार ७ सय ६१ सरकारको देश’ ‘एक नागरिक तीन तहका सरकारको शासन’, ‘तीन तहका सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने एक नागरिक’, ‘तीन तहका सरकार...
बाढीपहिरो जोखिमबाट बच्न भौगर्भिक अध्ययन जरुरी
Kumar Raut - June 18, 2021 0
अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकलगायतका भूबनोट कमजोर भएका जिल्ला बाढी तथा पहिरोबाट निकै प्रभावित भएका छन् । यी जिल्लामा २०७२ सालको भूकम्पपछि लगातार धनजनको क्षति हुँदै...
डा. देवीप्रसाद आचार्य - June 17, 2021 0
संघीय राज्य व्यवस्थाको आधार माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म गरेको जनयुद्ध, हो भन्नेहरू धेरै छन् । एकातिर माओवादीको सशस्त्र युद्धले समाज आव्रmान्त थियो भने...
श्रीमन नारायण - June 17, 2021 0
मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एक समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले केहीअघि जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई जनता समाजवादी पार्टीको...
Home कला ‘सेकुवा’ पुस्तकसँगै किशोर साहित्यको प्रवद्धन
‘सेकुवा’ पुस्तकसँगै किशोर साहित्यको प्रवद्धन
By लक्ष्मी विलास कोइराला
काठमाडौं । बिगत एक दुई दशकदेखि बालसाहित्यको प्रकाशन तथा प्रवद्र्धनमा केही उल्लेख्य कार्यहरू हुने थालेको भए पनि किशोर साहित्यमा भने कुनै पनि प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन । केही संस्थाहरूले किशोर साहित्यसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू नगरेका भने होइनन् तर निरन्तरता भने पाउन सकेको छैन ।
बालसाहित्य सिर्जना तथा प्रबद्र्धनमा लगभग दुई दशकदेखि सक्रिय रहँदै आएका सर्जक कृष्णदीप सिग्देलले आजभोलि किशोर साहित्यका क्षेत्रमा कार्य गर्न थालेका छन् । उनको हालै मात्र किशोर पाठक (१२ देखि १५ वर्ष उमेर समूह) लक्षित उपन्यास ‘सेकुवा’ प्रकाशित भएको छ । उनी यसै पुस्तकमार्फत किशोर साहित्यको प्रबद्र्धनमा लागेका छन् ।
गएको शुक्रबार ‘कथावाचक समाज’ तथा ‘साङ्ग्रीला बुक्स्’को संयुक्त आयोजना तथा सर्जक सिग्देलको संयोजनमा एक प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो । धादिङ जिल्लाको रिचोकटार स्थित बागेश्वरी मावीमा किशोर सहित्यमाथि चर्चा गरियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ आख्यानकार नयनराज पाण्डेले विद्यालयका किशोर किशोरीमाझ उमेरसम्बद्ध पुस्तकको आवश्यकताका बारेमा चर्चा गरे भने लेखक सिग्देलले आफ्नो बाल्यकालका अनुभव तथा पढ्ने बानीको विकासका बारेमा बताए ।
विद्यालयमा नियमित सञ्चालन हुने अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत गरिएको यस कार्यक्रममा कक्षा ९ र १० विद्यार्थीहरूको सिर्जनात्मक लेखनको प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो । विजयी विद्याथीहरूलाई साङ्ग्रीला बुक्स्का तर्फबाट पुरस्कार वितरण गरिएको थियो भने सहभागी सबै प्रतियोगीलाई एक एक प्रति ‘सेकुवा’ पुस्तक प्रदान गरिएको थियो । सहभागी विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिएका १०० प्रति पुस्तकहरू अमेरिकाको आयोवा राज्य निवासी श्री याङ्डु शेर्पाको आर्थिक सहयोगमा उपलब्ध गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा कथावाचक समाजका सदस्यहरू सुमन महर्जन तथा समन श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो । यस्तै प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम आगामी महिना काठमाडौँ, पोखरा तथा कपिलबस्तुमा पनि हुने जानकारी सर्जक सिग्देलले दिए । सर्जक सिग्देल कथावाचक समाजका उपाध्यक्ष हुन् भने साङ्ग्रीला बुक्स्का लागि बालसाहित्यका पुस्तकको संयोजक तथा सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् ।
आरआरआरमा आलियाले पाइन् अहिलेसम्मकै धेरै पारिश्रमिक
मुम्बई । ‘बाहुबली’ फेम निर्देशक एसएस राजामौलीको ‘आरआरआर’ आम दर्शकका लागि चासोको विषय बनेको छ । कोरोना संक्रमणले फिल्मको सुटिङमै अवरोध भएपछि फिल्म कहिले...
पाँच मिनेटको फिल्मले २ लाख ५० हजार पुरस्कार पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बृहत सहभागिताको अपेक्षासहित ‘म केही गर्छु’ शीर्षकमा लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता एनवाईएफ सर्ट...
राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघद्वारा निशालाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेलाई सहयोग मिल्ने क्रम जारी छ । उनी सदस्य रहेको राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघ नेपालले निशालाई सहयोग कार्य सुरु...
प्रशिक्षक ह्वाटमोर नेपाल आइपुगे
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक देभ ह्वाटमोर सोमबार नेपाल आइपुगेका छन् । कोरोना महामारीको कारण नेपालको घरेलु क्रिकेट ठप्प भएपछि अघिल्लो...
सलमानले कथामा जोड दिने
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानले अब फिल्मको कथामा जोड दिने बताएका छन् । सलमानको एक्सन हुनसाथ फिल्म चल्ने भन्ने मान्यता पछिल्ला फिल्मले तोडेपछि...
विवेक विवश रेग्मी -
कास्कीमा निषेधाज्ञा नहटाऊ : काँग्रेस
गण्डकी । नेपाली काँग्रेस कास्कीले कास्कीमा निषेधाज्ञा नहटाउन माग गरेको छ । कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको...
लमजुङमा रग्वी संघ गठन
लमजुङ । लमजुङमा नेपाल रग्वी संघ जिल्ला समिति गठन भएको छ । खेलाडीहरूको एक भेलाले प्रेम तामाङको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरिएको जिल्ला खेलकुद...
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीपत्नीको घरैमा हत्या, कामदार पनि मृत भेटिए
Breaking News Roshan Shrestha - February 10, 2020 0
काठमाडौं । आफ्नै घरको भान्छा कोठामा घाइते अवस्थामा फेला परेकी पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको हत्या भएको छ । सानेपास्थित उनको घरमा रहेका...
कोभिड–१९ विरूद्धको लडाईँ, पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध
Breaking News Roshan Shrestha - March 21, 2020 0
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन दिल्ली राज्यमा सरकारले कुनै पनि प्रयोजनका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिको भेला गर्न निषेध गरिएको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शनिबार...
नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने
अर्थ राजधानी समाचारदाता - April 30, 2021 0
काठमाडौं । बिमा समितिले थप नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्दै प्रस्ताव माग गरेको छ । समितिले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै पुनर्बिमा कम्पनीका...
अर्यालले सम्हाले काठमाडौं महानगरमा पदभार
प्रदेश ३ Kumar Raut - April 6, 2020 0
काठमाडौ । नेपाल सरकारका सचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच अर्यालले महानगरको प्रमुख...
हुलाकी सडकको काम गुणस्तरहीन : प्रभु साह
राजनीति Dhruba Lamsal - March 8, 2020 0
गौर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले हुलाकी सडकको काम गुणस्तरहीन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार...
भोलिदेखि मध्यम र लामो दूरीको बस सञ्चालनको तयारी
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - September 16, 2020 0
काठमाडौँ । झण्डै छ महिनादेखि थन्किएका मध्यम र लामो रुटका बस सञ्चालनका लागि तयारी भइसकेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यातायात व्यवसायी र चालक महासङ्घ...
प्याजमा एकै दिन किलोमा १५ रुपैयाँ बढ्यो
अर्थ Dhruba Lamsal - September 15, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा प्याजको मुल्य बृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएकै भोलिपल्ट नेपालमा भारतीय प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले...
निजी वित्तीय संस्थाले गडबढी गरे राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सकिने
Exclusive Kumar Raut - September 29, 2020 0
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारेमा कुनै गुनासो या समस्या भएमा सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सकिने गरी पहिलोपटक कार्यविधि आएको छ ।...
निर्वाचन तयारीमा जुट्यो आयोग
प्रमुख Kumar Raut - January 1, 2021 0
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग २०७८ वैशाखका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । आगामी १५ माघदेखि २१ माघसम्म देशभरका स्थानीय तहमा आयोगले मतदाता...
बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्र सिल
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - May 26, 2020 0
बूढानीलकण्ठ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ स्थित बूढानीलकण्ठ मन्दिर तथा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपास सिल गरिएको छ । बूढानीलकण्ठ –३ मा बसोबास...
गर्मी छल्न पाटन उक्लेका भेडिगोठको विचल्ली
सिन्धुपाल्चाेकमा बाढीले बगाउदा ७ जनाकाे मृत्यु
राजधानी समाचारदाता - June 16, 2021
गोलभेडा खेतीबाट एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई सहयोग
सञ्जीव दुलाल - June 14, 2021
चलचित्रकर्मी झन् अन्योलमा
डब्बु क्षत्री - June 14, 2021
दोर्दी खोलाले हिलेबजारका १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा
Kumar Raut - June 18, 2021
छाँगोमा अड्किएका २२ जनालाई डोरीले तानेर उद्दार